खुम्चियो अर्थतन्त्र, ४.६ प्रतिशत ऋणात्मक – nuakatha.in
March 8, 2021 adminLeaveaComment on खुम्चियो अर्थतन्त्र, ४.६ प्रतिशत ऋणात्मक
काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) महामारीका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ । कोभिडले आर्थिक गतिविधि ठप्प चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक(साउन–कार्तिक)मा अर्थतन्त्र ४.६ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । तथ्यांक विभागले बिहीबार तथ्यांक जारी गर्दै कोभिडले
अर्थतन्त्र खुम्चिएको जनाएको हो । तर पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधि चलायमान भएसँगै अर्थतन्त्र सकारात्मक गतिमा अघि बढेको विभागले जनाएको छ । गत आवको अन्तिम चार महिनामा सरकारले गरेको बन्दाबन्दीका कारण घरायासी उपभोगमा पनि असर परेको छ । विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले गत अ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको आकारमा संकुचन आएको बताए । सरकारले चैत्रदेखि ६ महिनासम्म लकडाउन (बन्दाबन्दी) गरेका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा संकुचन भएको हो । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १५.४ प्रतिशतले अर्थतन्त्रमा संकुचन भएको देखिएको छ । उपमहानिर्देशक रेग्मीका अनुसार चालु आवको पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै सुधारको संकेत देखिएको बताए । ‘पछिल्लो समयमा ’भी’ आकारमा सुधार हुँदै छ’,उनले भने,‘यो सकारात्मक कुरा हो ।
२०७५/७६ को पहिलो त्रैमासमा १०.१ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि लगातार ओरालो लाग्दै गएको विभागको आँकडाले देखाउँछ । विभागले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) गणनाको आधार वर्ष २०५७/५८ (सन् २०००/२००१) रिसेबिङ(परिवर्तन) गरी २०६७/६८ (सन् २०१०/११) बनाएको छ । नयाँ आधारसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँको पुगेको छ । यसअघि ३७ खर्ब ६८ अर्ब थियो ।
यसअघि जीडीपीको आधार १७ वटा विषय वस्तु भएकोमा अब २१ वटा विषय तय गरिएको छ । रिबेसिङले नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको आँकडा पनि बढेको छ । आधार वर्ष २०५७÷५८ अनुसार १ हजार ८५ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेकोमा वृद्वि भई १हजार १ सय ३४ डलर पुगेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले तीन वर्ष लगाएर तथ्यांक अध्ययन गरिएको बताए । कोभिडले असर गरेपनि विकासशील देशको जस्तो असर नगरेको दावी गरे । तथ्यांक प्रणालीमा सुधार गर्न सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।